Tag: feo | Martech Zone
Fepetra 5 rehefa mifantina ny feonao amin'ny talenta lehibe indrindra
Asabotsy, Jona 23, 2018 Douglas Karr
Nanorina fifandraisana matanjaka miaraka amina talenta feo maromaro izahay nandritra ny taona maro. Amanda Fellows dia iray amin'ny talentantsika amin'ny goto, ary koa Paul sy Joyce Poteet. Na horonantsary mpanazava iray manontolo na fampidirana podcast, fantatray fa ny fahitana ny feo marina amin'ny talenta dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny kalitaon'ny famokarana. Paul, ohatra, dia mitovy dika amin'ny tanànan'i Indianapolis. Nandeha tamin'ny radio, fahitalavitra izy, ary izy no niresaka momba izany
Zoma, Jona 1, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Tara Kelly
Alexa, mpanampy manokana afaka alefa amin'ny feo Amazon, dia afaka mitondra fidiram-bola mihoatra ny $ 10 miliara ao anatin'ny roa taona monja. Tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary dia nilaza i Google fa efa nivarotra fitaovana Google Home mihoatra ny 6 tapitrisa hatramin'ny tapaky ny volana oktobra. Ireo botsika mpanampy toa an'i Alexa sy Hey Google dia manjary lasa lafin-javatra tena ilaina amin'ny fiainana maoderina, ary manome fotoana mahatalanjona ho an'ny marika hifandraisany amin'ny mpanjifa amin'ny sehatra vaovao. Vonona handray an'io fotoana io ianao, maika ny marika
Alarobia 24 Janoary 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny Amazon Show dia mety ho fividianana tsara indrindra nataoko tato anatin'ny 12 volana. Nividy iray ho an'ny Reniko aho, izay mipetraka lavitra ary matetika manana olana amin'ny fifandraisana finday. Ankehitriny, azony atao fotsiny ny miteny ny Show mba hiantso ahy ary manao antso an-tsary isika ao anatin'ny segondra vitsy. Tena tian'ny Neny izany ka nividy iray ho an'ny zafikeliny izy mba hahafahany mifandray amin'izy ireo ihany koa. Haiko koa
Zavatra 10 Ora 8 amin'ny CES 2017 Nampianatra ahy momba ny teknolojia rahampitso
Zoma Janoary 13, 2017 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 John Koetsier
Toy ny adala aho, niditra tao amin'ny teknolojia, mpivarotra, influencer, hucksters, ary olona maro hafa 165,000 tao amin'ny CES 2017 tamin'ny herinandro lasa teo. Ny ankamaroan'ny fotoanako dia lany tamin'ny fihaonana tamin'ny olona. Na, marimarina kokoa, ao amin'ny Lyfts, Ubers, sy ny cabs matoky ny fivezivezena avy any afobe mankany amin'ny olona. Fa nitahiry adiny valo aho ho an'ny zavatra tokony hataon'izay rehetra tia teknolojia farafaharatsiny farafaharatsiny: mirenireny amin'ny gorodon'ny efitrano fivoriambe lehibe ao CES, ny